သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ထွက်မသွားပါနဲ့ကွယ်..
လက်တွေ့မကျဘူးလို့ ခံယူထားတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ..
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:56 PM
ကျနော်က သီချင်းနားထောင်ရာမှာ နား ချာလှ သည်။ တသက်လုံး အင်္ဂလိပ်သီချင်း နားထောင်ဖူး ကျင့် မရှိခဲ့တာကြောင့်လည်း ပါမည်။ ထို့ကြောင့် Youtube မှာ တခါတရံ အင်္ဂလိပ်သီချင်း နား ထောင်ချင်လျှင် lyrics တောင်းပြီးမှ နားထောင်ဖြစ်သည်။ မလေးတင်ပေးသည့် ဒီသီချင်းကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်သော်လည်း ဂီတသံ (ရစ်သမ်) ချိုမြမြ ကို နားထောင်သွား ပါသည်။ Lyrics in English ပါသော် ကောင်းပေမည်ဟုတော့ တွေးမိ၏။း))
နတ်ဆိုးကို ခ၀ါချတဲ့အထဲ ထည့်လိုက်တယ် . . ရက်စက်လိုက်တာ . . နတ်ဆိုးက သူ့ဟာသူအေးအေးဆေးဆေး ကဗျာလေးပဲ ရေးနေတာလေ . . မလေး ရက်စက်တယ်း)))))))သီချင်းလေးကို ဖြည်းညှင်းစွာအစကနေ ခံစားသွားတယ် အဆုံးရောက်သွားတယ် . . . လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားမလည်လိုက်ဘူးရယ် .း))))))) ဟားဟား
ကိုယ့်အမ ပျော်ရွင်ပါစေဗျား))
စကားပြေ မသုံးဘဲ စကားပြောနဲ့ ကော့မန့်တွေ ရေးလို့ မရဘူးလားဟင် :P
မလေးကဗျာလေးကို အချိန်ပေးဖတ်သွားလို့ ကြည်နူးမိပါတယ်..
ရေမချိုးတာ ကြာပြီလားလို့ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်ဖွပ်လိုက်မိတာရယ်.. :D
Malay's suggestion cordially noted. ( ဟဲဟဲ.. အဖိုးကြီးယောင် ဆောင်ြဲကည့်တာပါ မလေး။ နောက်တချက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို တစုံတရာ သရော်ချင်စိတ် ဝင်နေရင် စကားပြေနဲ့ ရေးချင်တဲ့ mood ဝင်နေတတ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောပြချင်နေရင်တော့ စကားပြော mood ပေါ့။ နောက်တချက်က အကို့မှာ "ရင်ကို သစ္စာ မဖောက်ရေးမူ" (ရင်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ mood အတိုင်း ရေးချလိုက်ရေးမူ) တခု အလိုလို ရှိတယ်။ ဥပမာ၊ အကို မော်ဒန်ကဗျာ ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ နည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မော်ဒန်ကဗျာ ဖြစ်အောင် (လုပ်) ရေးရင် အဲဒါ ကိုယ့်ရင်ကို သစ္စာဖောက်တာ လို့ ထင်နေမိတာ မျိုး။ )
အလွမ်းကဝေ ရဲ့ ပန်းစည်းကြွေသံ